Raad Raac News Online – Xulka Soomaaliya oo Guldaradii 2-aad Maanta ay soo Wajahday kuna haray Wareegga Group-yadana ka haray.
Xulka Soomaaliya oo Guldaradii 2-aad Maanta ay soo Wajahday kuna haray Wareegga Group-yadana ka haray.
Faarax November 28, 2012 0
Xulka Soomaaliya ayaa ku haray wareega group-yada ee koobka bariga iyo bartamaha Afrika ka dib markii guuldaradii labaad oo isku xigta ay ka soo gaartay xulka Sudan, iyadoo looga badiyay gool soo daahay oo Sudan ay dhalisay dhamaadkii ciyaarta.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah, waxaana ay ciyaarta ku socotay mid ay labada xul ay kala qeybsanayaan dhibcaha, laakiin daqiiqadii 85aad ayaa xulka Sudan uu helay gool uu u dhaliyay Mohammed Farid.
Waa guuldaradii labaad ee Group B ee soo gaarta Somaliya ka dib guuldaradii Burundi ka soo gaartay axadii hore waxaana ay taasi xaqiijineysaa in xulkeena Soomaaliya uu ka haray tartanka bariga iyo bartamaha Afrika.
Waxaana ay la ciyaari doonaan kulanka ugu danbeeya ee Group B xulka Tanzania.
Soomaaliya iyo South Sudan oo guuldaradii labaad ay shalay ka soo gaartay Kenya ayaa ilaa iyo haatan boorsooyinkooda ka qaatay koobka Cecafa ee ka dhacaya sannadkan Uganda.
Waxaa Qoray: Saed Mohamed Balaleti